Otu esi edozi nnweta vs. Mgbalị Ndabere | Martech Zone
Mgbe m na-achọ inweta onye ahịa ọhụụ, ekwenyere m n'ezie nnukwu nsogbu ị ga - emeri bụ ntụkwasị obi. Onye ahịa ahụ chọrọ inwe mmetụta dị ka a ga - asị na ị ga - ezute ma ọ bụ karịa atụmanya maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. N'oge nsogbu akụ na ụba, nke a nwere ike bụrụ ihe ọzọ karịa ka atụmanya na-echekwu nchekwube na ego ha chọrọ imefu. Maka nke a, ọ nwere ike ịdị mkpa ka ịhazie mbọ azụmaahịa gị dabere na ndị ahịa gị dị.
Njide enweghị ike ịbụ atụmatụ gị niile, site na. Njide na-eme ka ụlọ ọrụ bara uru pụta na ọ pụtara na ị na-eme nke ọma ịnye ndị ahịa gị uru. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị azụ ndị ahịa ọhụụ oge niile, enwere nsogbu:
Ndị ahịa gị nwere ike ịhapụ gị ka ọ bụrụ na ị ga-ahapụ.
Ndị ahịa gị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ na ịnwa imechi ma pụọ ​​na omume.
Nwere ike enweghị ike ịkwalite azụmaahịa gị nke ukwuu.
Na ozi infographic a site na Data mbu, ha na-enye ufodu onu ogugu, atumatu, na usoro eji eme ihe usoro nnweta na njigide. Nke kachasị mma, ha na-enye nduzi na imezi usoro ịre ahịa na ọrịre gị n'etiti atụmatụ abụọ a.
Nnweta vs. Njide Statistics
E mere atụmatụ na ọ fọrọ nke nta 40% nke ego ha nwetara site na azụmahịa ecommerce si megharịa ahịa.
Ulo oru nwere a 60 ka 70% ohere nke irere na ihe dị ahịa tụnyere 20% ohere maka a ọhụrụ onye ahịa.
Dị ka ụfọdụ ndị ọkachamara si kwuo, azụmahịa siri ike kwesịrị itinye uche na ya 60% nke ihe omuma ahia na njide ndị ahịa. Businesseslọ ọrụ ọhụrụ kwesiri itinye otutu oge ha n'inweta, n'ezie.
Izizi nnweta vs. njigide
Mgbalị ahịa gị nwere ike ikpebi etu ị si enweta ma ọ bụ jigide ndị ahịa. E nwere isi atumatu uzo ise iji tinye:
Lekwasị anya na Ogo - dọta ndị ahịa ọhụrụ ma gbaa ndị dị adị ume ka ha nọrọ na ọrụ na ngwaahịa pụrụ iche.
Soro ndị ahịa ugbu a soro - mee ka ndị ahịa gị dị ugbu a nwee mmetụta dị oke mkpa site na ịrịọ ha ka ha gbasaa gbasara gị site na nyocha ịntanetị.
Nabata Online Marketing - Jiri mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji jikọọ ndị ahịa ọhụrụ ma lekwasị anya n'ịntanetị email iji jikọta ndị dị adị.
Nyochaa isi ahịa gị - banye n'ime data gị iji chọpụta nke ndị ahịa gị ugbu a bara uru ijide na nke na-abụghị.
Nweta Onwe Gị - Zipu ihe edere na aka ndi ahia di ugbua maka ahia di ire nke n’enye aka iwulite okwu onu.
Banyere data mbu
mbụ data bụ onye ndu ụwa na ịkwụ ụgwọ na teknụzụ ego, na-arụrụ ọtụtụ puku ụlọ ọrụ ego na ọtụtụ nde ndị ahịa na azụmaahịa ihe karịrị mba 100.
Tags: ịkụ azụnjigide